I-Recipe Saladi kwiindidi ezahlukeneyo zeembotyi
Indlu yasekhaya Recipes Okunye Izithako Imifuno Ummbi
Isaladi ye-Bean Ndincoma ukuba ndizame isaladi ekhanyayo kunye nokubonakala kunye nencoko. Isaladi kwiintlobo ezintathu zeembotyi, iinqwelo zeKorea kunye nommbila kufanelekile kwitafile yeholide, kunye nemenyu yansuku zonke. Uninzi lwezithako lukulungele ukusetyenziswa, okwenza isaladi iphephe ngokupheka. Ukuba akukho zikarothi ezilungeleyo zaseKorea, ngoko-ke ukhawule ii-carrots ezicocekileyo kunye ne-anyanisi, ugarlic uze udibanise kunye nokongezwa kwe-coriander kunye ne-peppers.
Iimbotyi ezimhlophe zenziwe ngamanzi 200 g
Iibhontshisi ezibomvu zivuna 200 g
Iibhontshisi zefotyi ezinqabileyo 250 g
Ingqolowa ekhatywayo 150 g
Iikroti eKorea 150 g
Inyathelo 1 Ukulungiselela isaladi, pheka ingqolowa ekhonkxiweyo, ubhontshisi obomvu nobomvu, ubhontshisi bomnatha obuluhlaza, u-anyanisi, i-garlic kunye nekarothi eKorea.
Inyathelo 2 Kwisitya seladidi, udibanise ubhontshisi obomvu kunye nomhlophe, ummbila kunye neqathi kwiKorea.
Inyathelo 3 Iimbotyi ezinobumba eziluhlaza obushushu kunye namanzi ashushu ukususa i-ice glaze, uze ufume uze uyibeke kwi-oyile yemifuno, kunye ne-anyanisi eqoshiwe kunye ne-garlic ecoliweyo imizuzu emi-5-7.
Inyathelo 4 Ubhontshisi obuncinane obuqholiweyo kunye ne-anyanisi bongezelele kwezinye izithako kwaye udibanise.
Inyathelo 5 Ukugqoka isaladi kuya kuba yioli apho ubhontshisi behlanjululwe nge-anyanisi kunye negalikhi, kwaye ukunyuka okunye kuza kunika iikroti eKorea. Bon appetit!
I-corned baked in provencal herbs
Ummbila kwi-soy sauce
Isaladi kunye ne-shrimps kunye nengqolowa
Inkukhu kwi-rice cushion
Indlela yokujonga iminyaka engama-10 emncinci
I-Horoscope yonyaka we-tiger kwiintombi
I-Carrot mango smoothie
Ama-cutlets cutlets ngeeshizi e-oven
Iiswitshisi kunye ne-cheese basil crust
Indlela yokwenza intsimbi yeKrismesi
Ungayikhupha njani amabala kunye ne-acne?
Indlela yokukhawulezisa ukutshisa kwamafutha emzimbeni?
Ungadla njani ukuba uhlale uselula kwaye unempilo?
Yintoni yokupheka uNyaka omtsha we-2017 - iiteyibhile ezithatha ngeyinyathelo enezithombe. Ziziphi izitsha ezintsha zokukhetha kunye nokupheka ngonyaka we-2017 Rooster